Itoobiya Oo Jawaab Adag ka Bixisay Warbixin Ilhaan Cumar ku Eedeysay – Heemaal News Network
Danjiraha Itoobiya u fadhiya magaalada Washington ee dalka Maraykanka, Fitsum Arega, ayaa jawaab adag ka bixiyay warbixin ka soo baxday xafiiska Ilhaan Cumar, waxuuna warqad uu toos ugu diray ku daadifeeyey arimahaa ay ku eedeysay Itoobiya.
Safiirka ayaa sidoo kale sheegay in uu diyaar u yahay inuu si fool ka fool ah ula kulmo qudheeda oo uu u faahfaahiyo goor alla goorta ay diyaarka u tahay xaaladda Itoobiya ka taagan ee ay ka hadashay.
Sikastaba ha noqotee Colaadda Gobolka tigray ayaa weli taagan inkastoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in ay qabsatay magaala madaxda gobolka ee Mekelle. Dagaalkaas waxaa ka dhashay qasaare naf iyo maalba leh. Gulufkaan oo dhaxeeya dowladda Federaalka ah ee Itoobiya iyo xoogagga TPLF waxaa ku barakacay kummanaan shacb ah, kuwaas oo gaaray Suudaan.
Halkan ka Akhriso Warbixinta ay soo saartay Ilhaan Cumar:
Imaaraadka Oo Xayiraad Dhinaca Socdaalka kusoo Rogtay 13 Dal Oo ay ku Jirto Somaliya
Xukuumada Biixi Oo Beenisay Xogta Covid-19 Ee Somaliya Ka Sheegtay Somaliland.